Jubbaland oo War ka soo saartay sababta Kismaayo loogu diiday Lataliyaha Farmaajo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliyaha Booliska qeybta Jubbada hoose Gashaanle sare Sadiiq Maxamuud Dhogor oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay sababta keentay in maanta laga soo celiyo Kismaayo la Taliyaha Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka Cabdi Cali Raage oo dayuurad uu la socday laga horjoogsaday iney halkaas caga dhigato.
Gaashaanle Sare Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa sheegay in maalmahii lasoo dhaafay ay la socdeen dhaq-dhaqaaqyo ay kooxo uu hormuud u yahay Cabdi Cali Raage ka wadeen gudaha magaalada Kismaayo kuwaasoo la doonayay inay magaalada soo galiyaan hub sharci darro ah.
Waxaa uu xusay in hubkan la damacsanaa in lagu dhibaateeyo nabadda iyo kala dambeynta ka jirta Jubbaland.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay maanta ciidammadu ka war heleen in Cabdi Cali Raage uu kasoo kicitimay magaalada Muqdishu isaga oo isticmalaya magac aan kiisa ahayn si uu u yimaado magaalada Kismaayo, kaddibna ay ciidammadu amreen in uusan ka soo degi Karin garoonka diyaaraha ee magaalada Kismaayo.
Talaabadaas ayuu sheegay in loo qaaday si loo ilaaliyo nabadgaliyada iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Jubbaland.
“Cabdi Cali Raage ayaa ka mid ah dadka ka faa’iideysanayey khilaafka Dowlad goboleedka Jubbaland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya isagoo mudaba ka shaqaynaayey dibin daabyeynta Dowlad goboleedka Jubbaland” ayuu yiri taliyaha.